Maxaad kala socotaa 10-ka dumar ee Soomaalida ugu caansan dunida + SAWIRO | Dayniile.com
Feb. 20 WARARKA GUUD, WARKA MAANTA, XULKA WARARKA Comments Off on Maxaad kala socotaa 10-ka dumar ee Soomaalida ugu caansan dunida + SAWIRO
Barta hoose waxaan idinkugu soo gudbineeynaa warbixin ku lifaaqan 10-ka dumar ee Soomaalida ugu caansan kana gaaray noloshooda hormar kuwaasoo dunida ka gadmay kana noqday caan.
1. Ilhan Omar: 35jir Siyaasi Somali-American ah, Qofki ugu horeeyay ee Somali ah kana mid noqday Aqalka Wakiilada Mareykanka. Sido kale waa agaasimaha Shabakada Hal abuurka Haweenka iyo ku dhiiri gelinta Siyaasada.
2. Imaan Abdulmajid: Atariisho, Fashion Model, Ganacsade iska leh mid kamida shirikadaha caalamka ugu weyn ee soo saarta dumarka waxa ay isku qurxiyaan. Waxa ay xaaskiisa ahayd fannaanka Britishka ah David Bowie oo ah ninka Qaarada Europe ugu taageero badan waa uu ka geeriyooday sannadki hore.
3. Warsan Shirre: 30 jir Qoraa, Gabyaa, tifaftitirre iyo macalin jaamacadeed. Waxa ay qortay Albumka 6aad ee caalamka ugu qaalisan (Lemonade) waxaa ku luuqeysa boqorada codka Beyonce Knowles. Waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta gabyaaga nus qarniga Britain.
4. Sabrin Dhore: Gabar Somaliyed oo uu xushay mid kamid xiddigaha Hollywood ka jilaa iyo isku dubaridde Idris Elba. Waxa uu saxaafada kahor sheegay inay tahay qof shaqsiyad fiican isagoo aan guur rabinna oo jecleystay in darteed go’aankiisa uu u badalo.
5. Marwa Fadumo Qasim Dayib: Siyaasi, aqoon yahan u ololeysa muujinta awooda dumarka. Waxa ay ahayd gabadhi ugu horeysay ee isu soo sharaxfay xilka madaxweyne nimo. Waxa ay cilmiga horumarinta aadanaha kusoo baratay Jaamacada (Harvard University). Hadda waa ergeyga gaarka ah ee Somalia u qaabilsan Hey’ada Qaramada Midoobe Qeybta Haweenka.
6. Mamo Maryam Qasim: Waxa ay labo mar soo noqotay wasiir marki dambe waxa ay ahayd Wasiir gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waa shaqsi ku sifeysan daahfurnaan. Aqoonyahan cilmi diini iyo maadi ay ka muuqato. Waxa ay sidoo kale 20sano lasoo dhaafay ka shaqeyneysay samafalka.
7. Min. Amina Mohamed: Qareen Somali Kenyan ah, Diblomaasi & Siyaasi. Waxa ay horay usoo ahayd Agaasimaha Hey’ada Socdaalka Adduunka (IOM), waxa ay sidoo kale agaasime kasoo noqotay Hey’ada Ganacsiga Adduunka iyo agaasime ku xigeenkii barnaamijka bey’ada ee Qaramada Midoobe. Hadda waxa ay tahay wasiirka Arimaha Dibada Dalka Kenya.
8. Amina Moghe Hersi: Waa gabar bilyaneer ah waa saldhigeedu yahay Kampala, Uganda. Waxa ay leedahay Shopping Mall ka lagu magacaabo Oasis Shopping Mall, Dhimayashaa Laburnam Appartments, Warshada Sokorta ee Ataik waana maamulaha ugu sareeya shirikadeheeda ganacsi. Jariidada Ganacsiga ee Forbes waxa ay qortay sannadki hore in Amina ay tahay qofka 3aad ee Somalia ugu taajirsan.
9. Mama Malyun Suban: waxa ay kamid shaqsiyaadka ugu taageeraha badan Baraha Bulshada iyadoo ka hadashay mowduuca aad muhiim u ah (Arimaha Qoyska). Waxa ay taageerayaasheeda ku amaanaan in mowduuc loo baahnaa oo saameyn bulshada ku leh ka hadasho.
10. Samiya Abdi (RIP): Waxa ay ahayd ubaxii saxaraha ka soo baxay cayaarihii Olombikada 2008, China ayay Somalia ku mataleysay nolol adag oo shaqo la’aan iyo amni darro ah kadib waxa ay damacday in nafteeda ay halis geliso (tahriib) si ay nolol fiican u raadsato nasiib darro Saamiya badda ayay ku shahiiday riyadeeda, xirfadeeda iyo tamarteedaba meeshaan ayaan ku weynay. 😢 😢
Waxaa Qoray: Liban Abdi Jaamac.
← Dowladda oo sheegtay inay la wareegtay qalabkii Idaacada Shabaab
Siyaasi Cabdirmaan Cabdishakuur oo taageeray in aan canshuurta la bixin →